मलाई यो मनपर्दैन! | Martech Zone
बुधबार, मार्च 14, 2012 बुधबार, मार्च 14, 2012 Douglas Karr
यी सायद सबैभन्दा खराब4शब्दहरू हुन् जुन तपाईले आफ्नो ग्राहकबाट एजेन्सीको रूपमा सुन्नुहुनेछ। तपाइँ कहिले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न यद्यपि यो प्राय: प्राय: हुन्छ। व्यक्तिले डिजाइनरहरू भाडामा लिन्छन् असम्भव... उनीहरूको टाउकोबाट दृष्टि तान्नुहोस् र छवि, साइट, भिडियो वा एक ब्रान्डमा राख्नुहोस्।
सबैभन्दा दुःखको कुरा, यो महत्त्वेपूर्ण उत्तर हो जुन महत्त्वेपूर्ण छ। तपाईलाई मनपर्दछ वा छैन वास्तवमा यसले केही फरक पार्दैन। जब सम्म कुनै डिजाइनले तपाइँको ब्रान्डलाई बिगार्न सक्दैन र यो पेशागत रूपमा डिजाइन गरिएको छ, तपाइँले तपाइँको गर्व - र तपाइँको राय निल्नु पर्छ - र के हुन्छ हेर्नुहोस्। डिजाइनरहरू एक अविश्वसनीय समूह हो ... प्रत्येक दिन औसत स्ट्यान्ड-अप हास्य भन्दा अधिक नकरात्मकतासँग काम गर्ने। हास्य विपरीत, डिजाइनर प्रतिक्रिया (उर्फ हेकलिंग) सोध्नु पर्छ।
यहाँ केहि सल्लाहहरू छन् तपाईलाई डिजाइनर डिजाइन गर्न दिईएको सामना गर्न सहयोग पुर्‍याउने:
तपाईंको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कहिल्यै सही विश्वमा सही रूपमा पुन: सिर्जना गर्नुहोस्। कहिले
तपाईं छैन एक डिजाइनर। संभावना छ, तिनीहरू do के राम्रो हो थाहा छ।
डिजाइन छ तिम्रो लागि होइन। डिजाइन छ तपाइँको श्रोताको लागि.
एक महान डिजाइनर कडा मेहनत को लागी डिजाईन को उद्देश्यहरु पुरा गर्न को लागी तपाइँको अनुरोधहरु र प्रतिक्रिया ... तपाइँको अनुरोधहरु डिजाइन छैन।
को साथ तपाइँको डिजाइनर प्रदान गर्दै स्वतन्त्रता रचनात्मक हुन उत्तम आउटपुट वितरित हुनेछ।
यसको सफलतालाई नाप्नको लागि डिजाईनको नतिजामा नै ध्यान दिनुहोस्।
यदि तपाईं डिजाइनको इनपुटमा भारी हाते हुनुहुन्छ र यसले कार्य गर्दैन भने, डिजाइनरलाई दोष नदिनुहोस्।
व्यवसायिक व्यक्तिको रूपमा, तपाइँ प्रायः सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ राम्ररी जान्नुहुन्छ। यदि तपाईं सफल हुनुहुन्छ भने, कहिलेकाँही यो मार्गबाट ​​बाहिर निस्कन अझ कठिन छ र तपाईंको डिजाइनरलाई काम गर्न दिनुहुन्छ। जब हामी इन्फोग्राफिक्स र साइटहरू विकास गर्दछौं, मलाई प्राय: के सिर्जना गरिएको हो मन पर्दैन ... तर म पनि विनम्र हुन्छु कि जब म सट्टामा आउँछु बाटोबाट बाहिर निस्कँदै, डिजाइन असफल।
ठूला डिजाइनरहरूले धेरै प्रश्नहरू सोधे र तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि केहि उदाहरण, ड्राफ्टहरू र पुनरावृत्तिहरू प्रस्तुत गर्न सक्दछन्। मँ तपाईंलाई घृणा गरेको डिजाईनमा लगानी गर्न कुरा गरिरहेको छैन; सबै पछि, तपाइँ यसको लागि भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँ यससँग बाँच्न आवश्यक छ। तर यदि यो एक यस्तो डिजाइन हो जुन कार्य गर्दछ र आवश्यक रूपमा तपाईंको शैली छैन भने, मौका लिनुहोस् र हेर्नुहोस् के हुन्छ!
र यसो नभन कोशिस गर्नुहोस्, "मलाई यो मन पर्दैन!"।
टैग: डिजाइनग्राफिक डिजाइनदृष्टान्तइंफोग्राफ़कजस्तैवेब डिजाइन
WordPress आपतकालीन पासवर्ड स्क्रिप्ट
मार्स 18, 2012 मा 10: 22 एएम
डगलस, तपाईसँग बढी सहमत हुन सकेन। ग्राहकहरू प्रायः डिजाइनर भाँडामा लिन्छन् जसले ग्राहकले आफ्नो टुक्राहरू डिजाइन गर्न सक्दछन्, जबकि डिजाइनरको सीपहरू उनीहरूको एडोब मेकानिकल सीपको पक्षमा टस गरिएको छ। ग्राहकहरू बुझ्न असफल हुन्छन् कि सक्षम डिजाइनरले उनीहरूको उपकरणहरू मात्र जान्दैनन् - उनीहरूलाई "डिजाईन" पनि थाहा छ, जुन उनीहरूको पेशेको सबैभन्दा ठूलो अंश हो। यसबाहेक, ग्राहकहरू बिर्सनुहोस् डिजाइन उनीहरूको श्रोताको लागि हो, उनीहरूको होइन।
फ्लिप साइडमा, डिजाइनरहरू र / वा प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू निश्चित हुन आवश्यक छ कि उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूलाई योग्य छन् र उनीहरूसँग सकेसम्म राम्रा परामर्श लिइरहेका छन्। ग्राहकहरूलाई जहिले थाहा हुँदैन कसरी उनीहरूको उद्देश्यहरू स्पष्ट पार्ने, त्यसकारण ग्राहकहरूसँग कुशल सञ्चार आवश्यक छ। साथै, धेरै "डिजाइनरहरू" चिनो हराउँछन्, वा उनीहरूले जे भन्छन् ती गर्दैनन्, र यसले कुनै उत्तम ग्राहकको उद्देश्य पूरा गर्ने उत्कृष्ट हेर्ने टुक्रा डिजाइन गर्न सक्दैन, यसले कति राम्रोसँग व्यक्त गरे पनि। मलाई लाग्छ केहि ग्राहकहरु यो सुस्त पनि हुन सक्छ।
मार्क्स 18, 2012 मा 12: 43 PM
तपाईं आफ्नो ग्राहक हुनुहुन्न।
यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन भने, त्यसोभए के?
स्वीकार्न गाह्रो - तर सत्य!
मार्स 19, 2012 मा 6: 31 एएम
ठिक छ, ग्राहक जहिले पनि त्यहाँ जान्छ जहाँ उसलाई समर्थन हुन्छ र म निश्चित छु कि सबैलाई यो थाहा छ। तर कहिलेकाँही हामी ग्राहकसँग कुनै पनि पैसा प्राप्त नगरी सहमत छौं। मेरो को रूपमा "ट्रस्ट" व्यवसाय मा एक महत्वपूर्ण शब्द हो।
मार्क्स 22, 2012 मा 12: 26 PM
मँ यो चिट्ठीको बारेमा सोध्छु भनेर हेर्दा कति पटक भन्न सक्छु वा त्यो ट्वीक वा यसको पछाडि विचारको प्रतिक्रिया मात्र प्राप्त गर्न "मैले प्रयास गरिसकेको छु" "यसले काम गरेन" किनभने र अवसरमा तुरुन्तै प्रदान गरिएको थियो मैले भनेको जस्तै कुराको बचत उदाहरणले मैले आफैंले देख्न सकें। बिभिन्न परियोजनाहरु को सम्बन्ध मा ती अनुरोधहरु को एक जोडी पछि Ive अब प्रश्न प्रश्न गर्न को लागी शुरू भयो किनकि अन्ततः तिनीहरू राम्ररी जान्दछन्।
साथै आईडी थप्नुहोस् न कि कबूतर होल तपाईंको डिजाइनर वा रचनात्मक समूह तिनीहरूलाई पर्याप्त विकल्पहरू वा प्रतिक्रिया अगाडि नदिई।